Tag: akabhadhara kushambadzira munharaunda | Martech Zone
Tag: yakabhadharwa kushambadzira munharaunda
Chii chinonzi Pay-Per-Click Kushambadzira? Statistics Dzakakosha Dzakabatanidzwa!
Muvhuro, June 3, 2019 Muvhuro, June 3, 2019 Douglas Karr
Mubvunzo wandichiri kubvunzwa nevaridzi vebhizimusi vakura ndewokuti vangaite here kana kuti kwete kubhadhara-per-click (PPC) kushambadzira kana kwete. Haisi yakapusa hongu kana kwete mubvunzo. PPC inopa mukana unoshamisa wekusundira kushambadza pamberi pevateereri pakutsvaga, zvemagariro, uye mawebhusaiti iwe aungasvike kazhinji kuburikidza nenzira dzehupenyu. Chii chinonzi Pay Per Click Kushambadzira? PPC inzira yekushambadzira pamhepo uko mushambadzi anobhadhara a
Wese Munhu Anovenga Kushambadzira… Kushambadzira Kunobhadharwa Kuchiri Kushanda?
NeChishanu, Gumiguru 9, 2015 Muvhuro, October 12, 2015 Douglas Karr
Pakave netoni yekutaurirana pamhepo nezve kupera kwekushambadzira. Twitter haina kunge yakanyanyisa kubudirira neayo ekushambadzira package. Facebook yakabudirira, asi vatengi vari kuwedzera kuneta kushambadzira kwakapararira kwese kwese. Uye kubhadharwa kwekutsvaga kuri kuenderera nekutyaira zvisingaite mari ... asi kutsvaga kuri kuderera sedzimwe nzira dzekutsvaga nekutsvaga ruzivo pamhepo dzinokura mukuzivikanwa. Ehezve, dai iwe waizobvunza vatengi (uye TechnologyAdvice uye Unbounce yakaita), iwe ungafunge kuti havana kukosha: